कपाल फुल्न सुरु गर्यो ? यस्तो छ कपाल फुल्न रोक्ने घरेलु उपाय « LiveMandu
२१ माघ २०७५, सोमबार १५:३५
आजभोलि अधिकांश मानिस तनावमा हुन्छन् । वातावरण पनि उस्तै प्रदूषित छ । जसका कारण युवा अवस्थामै कपाल फुल्ने समस्या हुन जान्छ । सेतो कपालले मानिसको पर्सनालिटीमा समेत असर पुर्‍याउँछ ।
मेलेनिन, भिटामिन बी–१२ को कमी, वंशाणुगत गुण, थाइराइडलगायतका समस्याले पनि मानिसको कपाल फुल्ने गर्छ । यसरी कपाल फुलेका मानिसले औषधि उपचारका लागि कैयौँ ठाउँ धाउने गरेको पनि पाइन्छ । तर, घरमै पनि केही सावधानी अपनाउन सकेमा कपाल फुल्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
अमलामा एन्टिअक्सिडेसन हुन्छ, जसले कपालका कोषिकाहरूलाई सेतो हुन दिँदैन । त्यसका लागि अमलाको धुलोले नुहाउनुपर्छ वा मेहदीसँग मिलाएर लगाउनुपर्छ । अमलाले कपाललाई मजबुत बनाउन पनि सघाउ पुर्‍याउँछ ।
अमलाको धुलोलाई कपालमा लगाएमा कपाल सेतो हुने, झर्ने, चुँडिने र पातलो हुने समस्याबाट बिस्तारै मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
तपाईं नरिवलको तेल कत्तिको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यदि प्रयोग गर्ने बानी छैन भने आजैदेखि प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस् । नरिवलको तेलले तपाईंको कपाललाई निकै फाइदा पुर्‍याउँछ ।